You are at:Home»Nhau Dzeutano»VaChisanyu vakagadzwa
By Muchaneta Chimuka on	 December 29, 2016 · Nhau Dzeutano
GURUKOTA rezveutano nekurerwa kwevana, Dr David Parirenyatwa, vakagadza VaFriday Chisanyu sasachigaro wesangano reTraditional Medical Practioners Council (TMPC), iro rinoona nezvemashandiro en’anga nemaporofita munyika yose, zvikuru munyaya dzeutano.VaChisanyu ndivo zvakare mukuru wesangano rinoona nezvevarapi vechivanhu nevemakereke, reZimbabwe National Practitioners Association (ZNPA).
Kugadzwa kwaVaChisanyu kunotevera ongororo yakaitwa nevebazi rezveutano nekurerwa kwevana nemamwe masangano anoona nezvevarapi vakadai zvikaonekwa kuti ndivo vakakodzera kutora chigaro ichi.
Mumashoko avo ekutambira chigaro ichi, VaChisanyu vanoti vanofara zvikuru nedanho iri.
Vanoti vachashanda nemazvo mukoona kuti kodzero dzevarapi vechivanhu nevemakereke nedzevarwere, dzacherechedzwa.
“Mubasa rangu idzva iri, ndichange ndichikotsvera masangano ose anomiririra varapi vechivanhu nevemakereke tichinzvera mashandiro avo kuti ari kuitwa negwara here pasina kutyorwa kwekodzero dzevarapi nevarapwa. Tichaona kuti munhu wose anozviti murapi anofanira kunge aine sangano raanoshanda raakanyoresa naro achipihwa magwaro ekushanda zviri pamutemo,” vanodaro.
VaChisanyu vanoti masangano anomiririra varapi vechivanhu nevemakereke anowaniswa magwaro ekushanda zviri pamutemo neTMPC kuti vange vachikwanisa kuzonyoresa nhengo dzavo zviri pamutemo.
“Chigaro ichi ndichange ndakachibata kwemakore matatu anotevera uye tichada kuona kuti taendesa vaongorori (health inspectors) mumatunhu ose ayo anofamba achiongorora mashandiro evarapi. Izvi tichazviita nekuti tiri kuona kuti dambudziko revarapi vemanyepo riri kuramba richikura munyika muno nekuti pose patinofamba, kunyangwe mumaguta, hazvichatyisi kuona vanhu vachinwiswa miteyo pachena asi nzvimbo dzacho dzinenge dziine huchapa, kusanganisira zvigubu zvinoiswa mishonga nekunobva mvura dzinosanganiswa nemishonga yacho,” vanodaro. Vanoenderera mberi vachiti: “Tinoda kuti Hurumende itiwanise masimba kuburikidza nemutemo kuti tinge tichikwanisa kusunga varapi vemanyepo vachitonomiswa pamberi pematare edzimhosva. Vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo nenzira yechibharo, kubirwa mari nezvipfuyo zvavo zvinokosha, kupumhwa huroyi nekukandirwa nyoka nemazizi mudzimba zvemanyepo kana kutorasikirwa neupenyu apo vanonwiswa miteyo asi nyaya idzi dzisisamhan’arwe. Tinodawo chengetedzo (herbal authority) kuti mishonga yedu isabiwe nevanozviti vane ruzivo.”
Pasi pemutemo wenyika, imhosva huru kuti n’anga kana muporofita aiite zvehutsikamutanda. VaChisanyu vanoti hofisi yavo ichange ichionawo kuti varapi vechivanhu nevemakereke vari kuita basa ravo nechido.
Zvakadai, VaChisanyu vanoti vari kutarisira kuzovhura chikoro chinodzidzisa varapi vechivanhu nevemakereke mabatirwo akanaka evarwere vakabatana nebazi rezveutano nekurerwa kwevana munguva pfupi inotevera.
Vanoti zvisinei nebasa guru riri kuitwa nesangano reTMPC rekudzidzisa varapi vechivanhu nevemakereke mumatunhu akasiyana, pachine mukaha mukuru panyaya dzekunyoreswa zviri pamutemo kwevarapi ava.
Vanotizve varapi vanodarika 60 000 vari kushanda zvisiri pamutemo munyika yose.
“Handisi kuzoremerwa nebasa nekuti ndiri munhu agara achishanda nevarapi vechivanhu nevemakereke kusangano randinotungamirira reZimbabwe National Practitioners Association uye iniwo ndiri murapi wechivanhu, saka hapana chitsva. Ndiri munhu anoziva nhuna dzevanhu saka ndiripo pakugadzirisa zvinetswa,” vanodaro.